Kimono Mpanamboatra - China Kimono Suppliers & Factory
Japanese style Cross Collar Kimono ho an'ny trano fisakafoanana sy hotely CU1099Z059001T-4
Marika CHECKEDOUT fanamarinana OEKO-TEX standard 100 Code Code CU1099Z059001T-4 habe M-2XL Ireo teny fototra amin'ny chef fanamiana, chef coat, chef palitao, palitao nahandroana fanamiana, fanamiana hopitaly, kimono Fabric 60/40 poly / cotton GSM 145g ECO-friendly Xinjiang Aksu landihazo lava matevina, tsy misy lainga, tsy mihemotra, tsy misy karsinogens, fiainana aina dia in-2 toa palitao mahazatra. Ny manjaitra Thread Polyester kofehy koa dia antsoina hoe kofehy matevina. Matetika (antsoina hoe jiro) no iantsoana azy matetika. Wh ...
Japanese style Medium Sleeve Cross Collar Kimono ho an'ny trano fisakafoanana sy hotely CU1099Z161012H
Marika CHECKEDOUT fanamarinana OEKO-TEX standard 100 Code Code CU1099Z161012H habe M-2XL Ny teny fototra amin'ny chef fanamiana, chef coat, chef palitao, palitao fanamainty, fanamiana culinary, fanamiana hopitaly, kimono Fabric 60/40 poly / cotton GSM 145g E-Xinjiang Aksu tia an'i ECO lava zipo, lava-kizo, tsy on-patsa, tsy miery tsy misy naoty, tsy misy karsinogens, famelomana aina dia in-2 toa palitao mahazatra. Ny manjaitra Thread Polyester kofehy koa dia antsoina hoe kofehy matevina. Matetika (antsoina hoe jiro) no iantsoana azy matetika. Whic ...
Japanese style Medium Sleeve Cross Collar Kimono Ho an'ny trano fisakafoanana sy hotely CU1118Z123124AQ
Marika CHECKEDOUT fanamarinana OEKO-TEX standard 100 Code Code CU1118Z123124AQ Size M-3XL Ny teny fototra amin'ny chef uniform, chef coat, chef jacket, palitao, kojakoja an'ny hopitaly, fanamiana hopitaly, kimono Fabric 100% vita amin'ny landihazo Eco Xinjiang Aksu milay, no-pilling, tsy-mihena, tsy misy karsinogen, fiainana ny serivisy dia in-2 toy ny akanjo mafana ny chef. Ny manjaitra Thread Polyester kofehy koa dia antsoina hoe kofehy matevina. Matetika (antsoina hoe jiro) no iantsoana azy matetika. Iza no mitafy, ...
Japanese style Medium Sleeve Cross Collar Kimono Ho an'ny trano fisakafoanana sy hotely CU1118Z124123AR
Marika CHECKEDOUT fanamarinana OEKO-TEX standard 100 Code Code CU1118Z124123AR habe M-3XL Ny teny manan-kaja chef fanamiana, chef coat, chef jacket, palitao, fanamainan'ny culinary, fanamiana hopitaly, kimono Fabric 100% vita amin'ny landihazo Eco Xinjiang Aksu milay, no-pilling, tsy-mihena, tsy misy karsinogen, fiainana ny serivisy dia in-2 toy ny akanjo mafana ny chef. Ny manjaitra Thread Polyester kofehy koa dia antsoina hoe kofehy matevina. Matetika (antsoina hoe jiro) no iantsoana azy matetika. Iza no mitafy, ...
Japanese style Medium Sleeve Cross Collar Kimono ho an'ny trano fisakafoanana sy hotely CU1119Z161012H
Marika CHECKEDOUT fanamarinana OEKO-TEX standard 100 Item Code CU1119Z161012H habe M-3XL Teny fanalahidy kofehy, kotrana chef, palitao chef, palitao nahandroana fanamiana, fanamiana hopitaly, kimono Fabric 100% vita amin'ny landihazo Eco Xinjiang Aksu milay baomba, no-pilling, tsy mihemotra, tsy misy karsinogen, fiainana ny serivisy dia in-2 toa palitao mahazatra. Ny manjaitra Thread Polyester kofehy koa dia antsoina hoe kofehy matevina. Matetika (antsoina hoe jiro) no iantsoana azy matetika. Iza no mitafy, l ...
Colar Favam-bolo loko fotsy vita fotsy fotsy Kimono CU1117Z002000A
Marika CHECKEDOUT fanamarinana OEKO-TEX standard 100 Code Code CU1117Z002000A habe M-2XL Ny teny fototra amin'ny chef uniform, chef coat, chef jacket, palitao nahandroana fanamiana, fanamiana hopitaly, kimono Fabric 65/35 poly / cotton GSM.235g ECO-Xinjiang sariaka ECO Aksu lava staple landihazo, tsy on-patsa, tsy fanala, tsy misy karsinogen, fanolorana aina dia in-2 toy ny akanjo chef mahazatra. Ny manjaitra Thread Polyester kofehy koa dia antsoina hoe kofehy matevina. Matetika (antsoina hoe jiro) no iantsoana azy matetika. Iza ity ...
Japanese style Medium Sleeve Cross Collar Kimono ho an'ny trano fisakafoanana sy hotely CU1117Z130000A
Marika CHECKEDOUT fanamarinana OEKO-TEX standard 100 Item Code CU1117Z130000A habe M-2XL Ny teny fototra amin'ny chef uniform, chef coat, chef jacket, palitao, fanendrena culinary, fanamiana hopitaly, kimono Fabric 65/35 poly / cotton GSM.235g ECO-Xinjiang sariaka ECO Aksu lava staple landihazo, tsy on-patsa, tsy fanala, tsy misy karsinogen, fanolorana aina dia in-2 toy ny akanjo chef mahazatra. Ny manjaitra Thread Polyester kofehy koa dia antsoina hoe kofehy matevina. Matetika (antsoina hoe jiro) no iantsoana azy matetika. Iza ity ...